JACK RUSSELL TERRIER DOG MACLUUMAADKA IYO SAWIRADA - EEYAHA
Jack Russell Terrier Dog Macluumaadka iyo Sawirada
Jack Russell Terrier-ka qaangaarka ah ee qaangaarka ah
Jack Russell waa mid adag oo adag, oo aad u fara badan marwalba. Dhererka jidhku waa inuu ahaadaa mid u dhigma dhererka, waana inuu soo bandhigaa muuqaal isu eg, dheellitiran, oo had iyo jeer ku jira xaalad adag, xaalad adag. Madaxa waa inuu ahaadaa mid isku dheelitiran oo u dhigma jirka. Qalfoofku waa inuu ahaadaa mid fidsan, oo ballac dhexdhexaad ah dhegaha, indhahana u cidhiidhiya. Joogsiga, oo ah aagga kala-guurka ee dhakada dambe ilaa muzzle, waa in la qeexaa, laakiin aan si aad ah loogu dhawaaqin. Dhererka xuubka sanka ilaa joogsiga waa inuu ka yara yaraadaa masaafada u jirta istaanka ilaa occiput. Sanku waa inuu noqdaa mid madow. Daanka waa inuu noqdaa mid xoog badan isla markaana si fiican u lafaha u leh dhabanno xoog leh. Indhaha waa inay ahaadaan kuwo yicib u eg, midab madow oo nolosha iyo caqliga ka buuxa. Dhagaha yar ee V-ga ah, badhanka dhegaha ayaa horay loo sii wadaa, oo ku dhow madaxa oo leh dhumuc dhexdhexaad ah. Waxay leedahay ilko adag, oo kuwa kore xoogaa ka hooseysa. Laba qaniinyo waa heer la aqbali karo iyo maqas, iyadoo maqaska la doorbido. Qoorta ayaa nadiif ah oo muruq ah, oo dhererkeedu wanaagsan yahay, oo tartiib tartiib ah ugu fidaysa garbaha. Garbaha waa inuu noqdaa mid foorara oo si fiican dib loo dhigaa, ku ganaaxa meelaha isla markaana si cad u gooya meelaha engejiya. Cirbadaha hore waa inay ahaadaan kuwo adag oo toosan oo leh laabatooyin isku toosan. Suxulladu waxay sudhan yihiin dhinac midig oo waxay ka shaqeeyaan bilaa dhinacyada. Laabku waa inuu ahaadaa mid gacmeed, cidhiidhi ah iyo lugaha hore ee aan si weyn u kala fogeyn, oo siinaya jimicsi, halkii uu ka muuqan lahaa muuqaal muuqaal xabad leh. Tilmaame ahaan oo keliya, xabadka waa inuu ahaadaa mid yar oo si fudud loogu kala bixin karo garbaha gadaashiisa, celcelis ahaan gacmo cabirkoodu le'eg yahay, marka terrier-ka uu yahay mid taam ah, xaalad shaqo. Dhabarka waa inuu ahaadaa mid xoogan, toosan oo, marka la barbardhigo dhererka terrier-ka, sii sawir dheellitiran. Dhexda waa in xoogaa la rujiyaa. Xariiqda dambe waa inay ahaato mid xoog leh oo muruq leh, si fiican loogu dhejiyay ciqaab wanaagsan iyo foorarka qallafsan, iyadoo siineysa wadis badan iyo riixitaan. Gadaal ka fiirinaya, hocksku waa inuu toosan yahay. Cagaha way wareegsan yihiin, cufan adag yihiin, ballaadhan yihiin, muuqaal bisad u eg yihiin, oo aan rogrogmadaan iyo dibedda midna. Dabada waa in loo dhigaa mid aad u saraysa, loona qaado si waali ah oo u dhiganta dhererka jidhka, badiyaa qiyaastii afar inji (marka la xidho), iyadoo la siinayo gacan qabasho wanaagsan. Fiiro gaar ah: Dhaqanka goynta dabada eyga (xiritaanka) waa ka mamnuuc wadamada qaarkood. Jaakada Jack waa mid siman, iyada oo aan aad u yareyn oo aan laga bixin qadar cayiman oo ilaalin ah canaasiirta iyo hoosta. Dahaadh ama dahaadh duuduuban, oo aan dhogor lahayn. Koodh jajab ah macnaheedu waa eeygu waxay leeyihiin iskudhaf labadaba jaakad jilicsan oo jilicsan oo leh jajabyo timo dhaadheer oo lagu qasay jaakada gaaban. Midabbada: caddaanku waa inuu ku badnaadaa (yacni, waa inuu ka badnaadaa 51% caddaan ah) oo leh calaamado madow, madow ama bunni ah. Calaamadaha Brindle iyo midabbada madow iyo tan ayaa ka dhex dhaca noocyada laakiin waa dhif iyo naadir. Socodka: dhaqdhaqaaqa waa inuu ahaadaa mid xor ah, mid nool, oo si fiican isugu dubbaridan ficil toosan xagga hore iyo xagga dambe. Nabarradii hore ama dhaawacyada, natiijada shaqada ama shilalka, waa in aan loo oggolaan in lagu naco fursadda argaggixisada ee giraanta bandhigga illaa ay faragelinayaan dhaqdhaqaaqeeda ama utilitykeeda shaqada ama istuuqa. Nooc Irish ah oo la yiraahdo Jack Russell Shortys wuxuu leeyahay lugaha ka gaaban kan Ingiriiska.
Jack Russell Terrier waa eey faraxsan, farxad leh, u heellan oo jecel. Waa mid dareen leh oo adeecsan, laakiin gebi ahaanba cabsi la'aan. Si taxaddar leh oo maad leh, wuxuu ku raaxaystaa ciyaaro iyo ku ciyaarista agabka carruurtu ku ciyaarto. Jacks xasiloon waa saaxiibtinimo iyo guud ahaan naxariis carruurta. Carruurta waa in la baraa inaysan ku jeesjeesi karin ama ku dhufan eeyga. Iyagu waa caqli badan yihiin, oo haddii aad u oggolaato inay hal inji qabsadaan, waxay noqon karaan kuwo ula kac ah oo go'aansada inay mayl qaadaan. Aad ayey muhiim u tahay inaad tahay eeygan hogaamiyaha xirmada . Wuxuu ubaahanyahay in lasiiyo xeerar uu raaco, iyo xadidnaan ku saabsan waxa uu yahay iyo wuxuu yahay looma oggola inuu sameeyo . Ha u ogolaan eeygan yar inuu ku dhaco Cudurka Dog yar , Halka uu aaminsan yahay inuu hogaamiye u yahay aadanaha oo dhan. Halkani waa meesha ay ka soo baxaan heerar kala duwan oo ah dhibaatooyinka dabeecadda, oo ay ku jiraan, laakiin aan ku xaddidnayn ilaalin , qabsashada, kala-go'id walaac , iyo ciyey waswaas ah. Waxay yihiin kuwo si heer sare ah loo tababaran karo oo ay awoodaan inay soo bandhigaan tabaha cajiibka ah. Waxaa looga adeegsaday TV-ga iyo filimada. Si kastaba ha noqotee, haddii aadan awood u muujin eyga, way adkaan kartaa tababarka. Noocani wuxuu ubaahan yahay tababare khibrad leh. Yukhsiyadaha loo oggolaaday inay la wareegaan waxay ku xadgudbi karaan eyda kale. Qaarkood waxay ku dileen ama ku dileen dagaalladii eyga. Hubso inaad lashaqeyso Jack. Waxay leedahay dareen ugaarsi xoog leh (kana xoog badan celceliskaaga terrier-ka) waana inaan lagu aaminin xayawaannada kale ee yaryar. Eygan ugaarsiga ah wuxuu jecel yahay inuu ceyrsado, sahamsho, ciyo oo uu qodo. Kaliya ha uga sii deyso sunta haddii ay si fiican u tababaran tahay ama ay ku jirto aag ammaan ah. Waxay heli doontaa nasasho la'aan iyo burbur haddii aysan helin jimicsi ku filan iyo hawlo ay ku mashquuliso maskaxdeeda. Jack Russells wuu fuulayaa, taas oo macnaheedu yahay inay ka kori karaan xayndaabka iyaguna way ka boodi karaan. Jack oo taagan 12 inji dherer ah ayaa si fudud u boodi kara shan dhudhun. JRTs maahan nooca loo yaqaan milkiilaha ey aan khibrad lahayn. Mulkiiluhu wuxuu ubaahanyahay inuu ahaado mid xoogan sida eeygu yahay, ama ninkan yar ayaa lawareegi doona. Milkiilaha saxda ah Jack runtii wuu fiicnaan karaa, laakiin laguma talinayo kuwa aan fahmin waxa loola jeedo noqoshada hoggaamiye xirmo run ah. Jacks oo maskax ahaan deggan, oo leh dhammaan dareenkooda xayawaan ee la kulmay, ma soo bandhigi doonaan dabeecadahaas xun. Iyagu ma aha astaamaha Jack Russell, laakiin waa halkii dabeecadaha bini'aadanka la keenay , taas oo ka dhalatey hoggaan aan tayo lahayn, oo ay weheliso la'aanta kicinta maskaxda iyo jirka . Waxay ku barwaaqoobi doonaan shaqo inay qabtaan. Jack Russell Terrier waa inuu soo bandhigaa muuqaal firfircoon, firfircoon oo feejigan. Waa inay la dhacdaa dabeecaddeeda aan baqdin lahayn iyo farxad leh. Waa in la xusuusnaadaa in Jack Russell uu yahay Terrier shaqeynaya waana inuu ilaaliyaa dareennadaas. Dareenka, fulaynimada ama xad-gudubka xad-dhaafka ah waa in la niyad-jebiyaa waana inay had iyo jeer u muuqataa kalsooni.
Dhererka: 8 - 15 inji (20 - 38 cm)
Miisaanka: 11 - 18 rodol (5 - 8 kg)
newfoundland iyo labrador ey isku dhafan
Qaarkood waxay u nugul yihiin kala-baxa jilbaha, cudurada indhaha laga dhaxlo, dhago la'aanta iyo Legg Perthes-waa cudur ku dhaca kala-goysyada miskaha ee ey yar yar. U janjeera burooyinka unugyada .
Jack Russell Terrier wuu ku fiicnaan doonaa aqalka dhexdiisa haddii si ku filan loo jimicsado. Waa mid aad u firfircoon gudaha wuxuuna ku fiicnaan doonaa ugu yaraan deyr dhexdhexaad ah.
Jack Russell Terrier waa wehel raaxo leh marka si ku filan loo jimicsado si kastaba ha noqotee haddii uusan helin ku filan, waxay noqon kartaa dhibaato. Waxay u baahan tahay in la qaato maalin dheer, maalinle ah, kacsan socod . Intaa waxaa dheer, wuxuu ku jiri doonaa sharaftiisa meel bannaan oo uu ku ordo, ugaarsado iyo ciyaaro.
Haddii Jack uu keligiis hadhay maalintii, ha ahaato guri dabaq ah ama guri, waa in si fiican loo jimicsado ka hor intaanu aadanuhu u bixin shaqada isagoo ku qaadanaya socod baako dheer ah ama orod , ka dibna dib loola soo baxo markii aad ku noqonayso guriga.
Dhammaan noocyada jaakadyadu way fududahay in la xajiyo Shanlo oo si joogto ah ugu cadayo burushka adag, oo maydh markii loo baahdo oo keliya. Si loo muujiyo, milkiilayaashu waa inay iska furaan jaakadda. Sida jaakada xunxun, Jack dahaarka dillaacsan ayaa u baahan in sidoo kale lagala baxo. Noocani waa celcelis daadiya.
Taranka waxaa loogu magac daray wadaad la yiraahdo Rev. John Russell. Waxaa loo adeegsaday eey ugaarsi ugaarsi yar ah gaar ahaan dawacada guduudan, oo laga qodayo godka laga qodo godkeeda bartamihii-1800-meeyadii. Ugaadhsiga Ingiriiska, eeyaha waxay u baahdeen inay noqdaan lugo dhaadheer oo ku filan si ay ula socdaan ugaarsooyinka. Bixiyeyaashu waxay xoogga saareen awooddeeda shaqo, markaa heerku aad buu u ballaadhnaa, oo u oggolaanayay noocyo badan oo jidh ah oo la aqbalay. Kuma faraxsanayn noocyadan kaladuwan ee noocyada shaqada ah ee loo yaqaan 'Jacks', laga bilaabo Abriil 1, 2003 ayaa Jack Russell Terrier Association of America loo beddelay Parson Russell Terrier Association of America. Noocyada shaqadu waxay sii ahaadeen Jack Russells halka noocyada showga Mareykanka ay noqdeen kuwa loo yaqaan Parson Russell Terrier . Qaar ka mid ah hibooyinka Jack Russell waxaa ka mid ah: ugaadhsiga, raad-raaca, kacsanaanta iyo qabashada tabaha. A Jack Russell Terrier la yiraahdo Moose wuxuu ku ciyaaray Eddie Crane telecom sitsiis Frasier.
i tus sawir boorso ah
FCI, ANKC, iyo IKC waxay u aqoonsan yihiin gaagaab sida Jack Russell Terriers iyo UKC inay u aqoonsadaan gaabyada Russell Terriers. Parsons waa Jack-lugta dheer ee lugta dheer lugta leh ee magacaaban rasmi ahaan loogu magacaabay Parson Russell Terriers . Jack Russell Terrier iyo Russell Terrier waa isku sinji, laakiin gebi ahaanba waa nooc ka duwan kan Parson Russell Terrier.
Naadiga Kennel-ka ee loo yaqaan 'Irish Kennel Club' wuxuu aqoonsaday Jack Russell Terrier oo ku sugan Ireland, isagoo qaadanaya heerka FCI ee taranka. Waqti ka mid ah AKC wuxuu aqoonsaday Jack Russell Terrier, hase yeeshee laga bilaabo Abriil 1, 2003 waxay u beddeleen magaca Parson Russell Terrier. Noocyadu waxay u kala qaybsameen laba nooc oo hadda Jack Russell Terrier iyo Parson Russell Terrier waxaa loo tixgeliyaa inay yihiin laba nooc oo kala duwan. Magaca beddelka Parson wuxuu qayb weyn ka yahay dacwad ka socota JRTCA illaa AKC, markii markii ugu horreysay la oggol yahay diiwaangelinta. Intaas waxaa sii dheer AKC, sida UKC, waxay hadda aqoonsan tahay waxa ay ugu yeeraan Russell Terrier, oo leh lugo ka gaaban kan Parson Russell Terrier.
Muuji lugta gaaban ee JRT markay tahay 6 sano jir— 'Waa eey aad u xiiso badan, wuxuu jecel yahay inuu ciyaaro 24/7 wuuna jecel yahay kubbadiisa.'
Ku tilmaan lugta gaaban JRT da'da 6 sano
1 toddobaad jir muqisho feeryahanka
Soo dejinta Biljamka ee ka diiwaan gashan FCI sida Jack Russell Terrier, UKC sida Russell Terrier iyo IABCA ee Mareykanka maaddaama Jack Russell Terrier uu matalayo Jack Russell Terrier ga gaaban, 10 'dheer.
Kani waa Horyaal Elk Creek Gaffer oo ah lambarka 2 ee Mareykanka 2003, wuxuuna matalayaa isirka UKC la aqoonsan yahay ee Russell Terrier.
Ingiriis JRT Gemma ee Caldbeck da'da 2 sano
Lahaanshaha sawirka Saddex Mile Jacks
Feeryahan adhijir Jarmal sawirro isku dardaray
Dobie madow iyo tan madow Jack Russell Terrier 10 bilood jir— Magaceedu waa Dobie, sikastaba waxaan ugu yeernaa Dum-Dum, oo ah mid qosol badan maxaa yeelay waa qof caqli badan oo jaceyl badan. Lammaanahaygu wuxuu u iibsaday dhalashadayda bisha Maarso ee la soo dhaafay. Markii aan u tagnay inaan helno iyada waxaan helnay arday kala duwan oo aan ka soo xulano. Dhammaantood waxay ahaayeen caddaanka caadiga ah ee leh astaamaha midabada kala duwan leh. Waxay ahayd tan kaliya ee madow iyo tan madow. Ninka ayaa yiri aad ayey u yartahay. Wuxuu sidoo kale sheegay inuu kaliya haysto arday kale oo midab leh sida Dum-Dum. Waan rabnay iyada maxaa yeelay way ka duwan tahay. Aniga iyo lammaanahayga aad ayaan u jecelahay iyadaana la wanaagsan caruurteena sidoo kale. Dum-Dum waxay haysaa buste iyo barkin u gaar ah sariirta oo nala joogta. Ma jiifsan doonto mana seexan doonto haddii aysan haysan busteheeda iyo barkinkeeda oo ay tahay inay ku xigto lammaanahayga. '
Sophie waa tusaale ka mid ah nooca Irish-ka gaaban Jack Russell oo ka duwan nooca leggier-ga.
Jack Russell Terrier nooca weyn ee Ingiriisiga ah oo leh lugo dhaadheer
Eeg tusaalooyin badan oo Jack Russell Terrier ah
Jack Russell Terrier Sawirada 1
Jack Russell Terrier Sawirada 2
Jack Russell Terrier Sawirada 3
Jack Russell Terrier Dogs: Sawirada Guryaha La Uruurin Karo
heeler buluug iyo collie soohdinta
adhijirka Australia collie mix puppy
brindle feeder god mix puppy